မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန် (တတိယ ဗားရှင်းးး Credit to Original Uploader)) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန် (တတိယ ဗားရှင်းးး Credit to Original Uploader))
မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန် (တတိယ ဗားရှင်းးး Credit to Original Uploader))
Posted by ဇီဇီ on Mar 13, 2014 in Food, Drink & Recipes, Local Guides, Society & Lifestyle | 40 comments
မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် လမ်းညွန်ကို တတိယဗားရှင်းထိ တွေ့ထားပြီးပြီ ဆိုတာ။
ပထမ ဗားရှင်း – ကေဇီ ကိုယ်တိုင်စား (အဲလေ) ကိုယ်တိုင်ရေးက ဒီမှာ
မန္တလေး စားညွှန် by KZ
ဒုတိယဗားရှင်း – ကေဇီမောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းရေးတာက ဒီမှာ
မန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ by Hein Zaw Nyo
ခု တတိယဗားရှင်းကိုတော့ ဆိုက် တော်တော်များများမှာ တွေ့တယ်။ မူရင်းဘယ်သူရေးတုန်းတော့ သေချာ ဂဂနန မသိဘူးဗျ။
အဖြစ်နိုင်ဆုံး ဆိုက် က ယူလာတယ်။
ဒီက (http://moemaka.blogspot.sg/2012/05/mandalay-food-guide-informal-guide.html?m=0) ယူလာတာ။
မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန် on Thursday, 17 May 2012 at 18:09 ·
by ChoZin De Earthzprinzezz on Thursday, May 3, 2012 at 4:57pm
အဲဒီတော့ ပိုင်ရှင် အစစ်များ ဖတ်မိရင်၊ ပိုင်ရှင် အစစ်ကို သိတဲ့ သူများ ဖတ်မိရင် ပြောပြပေးပါ။
မုန့်တီမန်းလေးမြို့ကို ရောက်ပြီဆို ဘာစားမလဲ မောင်ရေခဲ ဟု အစချီမေးလျှင် လူတိုင်းနီးနီး တရာမှာ ၉၉ က မန်းလေး မုန့်တီ ကို တောင့်တ ကြတာပင်၊ ဒီမှာ ရှင်းစရာ ရှိလာပြီ – မန်းလေးမုန့်တီတွင် နန်းကြီး၊ နန်းလတ်၊ နန်းသေး ၊ နန်းပြား ဟု ကွာခြားပေသည်၊ ရန်ကုန်မှာ ရောင်းသော နန်းကြီးသုတ်ဆိုသည်မှာ မန်းလေးတွင် နန်းလတ်ဟုခေါ်သော လက်သန်းလုံးမရှိတရှိ မုန့်တီ သာဖြစ်သည်၊ နန်းကြီးအစစ်ကား လက်မခန့် တုတ်ကာ တီကောင်နှင့်တူသဖြင့် တော်ရုံလူ မစားရဲသော မုန့်တီဖတ်တုတ်တုတ်ကြီးများ ဖြစ်သည်၊ နန်းသေးကား မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ဖြစ်ကာ နန်းပြားမှာ ခေါက်ဆွဲပြားသုတ်ကို ခေါ်တာပင်.
ဂေါဝိန်ဆိပ်နားက မုန့်တီကလည်း စားကောင်းတာပင်၊ ဒါပေမယ့် သူက မနက် နည်းနည်းနောက်ကျရင် ကုန်ပြီ၊
ဘုရားကြီးအာနန္ခာစောင်းတန်းက ကြီးတော်ခွေးကတော့ မုန့်တီ မရောင်းတော့ဘူး ထင်ပါတယ်၊ တခါသွားတော့ ထမင်းပဲ ရောင်းတော့တယ် ဆိုလား…….
ခိုတောင်မုန့်တီမှာ မန်းလေးမုန့်တီနှင့်မတူ။ အသားမပါ ၊ ဆီချက် ပဲမှုန့်သိပ်မများပဲ။ ပဲသီး ဂေါ်ဖီ ထည့်သုတ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ဗယာကြော်ထည့်သုပ်လို့လည်း ရပေသည်၊ မန်းလေး မုန့်တီလောက် မအီ၊ အဲ့လောက်လဲ ဈေးမကြီးသောကြောင့် ပိုစားကောင်းသည်၊
ပြီးတော့ ၃၃ လမ်းမှာ စိန်ဝင်းမြီးရှည်၊ လမ်းလည်ဘုရားနားက မြီးရည်ဆိုင် ၊ ၈၂ လမ်းက မန်ကျည်းရိပ်နှင့် ၁၉ လမ်း မြီးရှည်ကတော့ ၀က်အူတွေ ကလီစာတွေနှင့်ပါ ရနိုင်သည်၊ (ဒါပေမယ့် ၂ နာရီလောက်မှ ဖွင့်သည်)
အနှီ ကျွန်ုတို့နေထိုင်ရာ မန်းလေးမြို့သည်ကား ရှမ်းပြည်နယ်၏ တရုတ်မြို့တော် ဖြစ်သောကြောင့် အဲလေ မွှားလို့ ရှမ်းပြည် တရုတ်ပြည်တို့နှင့် နီးသောကြောင့် ရှမ်းစာ အလွန် ပေါလေသည်၊ မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် တပြလျှင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင် တဆိုင်အနည်းဆုံး တွေ့ရပေမည်။ နေ့လယ်စာ ညနေစာအတွက်လည်း ရှမ်းထမင်းပုံစားဆိုင်များတွင် မြောက်ပိုင်းရှမ်းတို့၏ လက်ရာအား ငွေကျပ်တထောင်နှင့် သုံးဆောင်နိုင်ပေ၏ ။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေကတော့ ပေါလွန်းများလွန်းလှသဖြင့် နည်းနည်းပဲညွှန်းတော့မည်၊ ၇၄လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားမှာ ရွှေမူဆယ်ရှိကာ အချိုအရသာ ကြိုက်သူတွေနှင့် သင့်တော်၏ ၊ သည်ဆိုင်တွင် ဆန်ချိုအေးလဲ ရသည်၊
မန်းလေးတွင် ပုံစား ရှမ်းထမင်းဆိုင်များမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် အားထားရာပင်၊ ပိုက်ဆံ ၈၀၀။ ၁၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းတနပ်ကို ဟင်းသုံးမျိုး ဖြင့် စားနိုင်သည်၊
ရေစစ်ကန်နားက ၀င်းစံပါယ်ကတော့ ထမင်းမရပေမယ့် အခြား ရှမ်းအစားအစာ ငါးထမင်း ။ ဟင်းထုပ်။ ငါးဒုက္ခ ရသည်၊ ဆမ်ဆိုင်းမြီးရှည် ။ သဘောင်္သီးထောင်း စားကောင်းသည်။.
မြန်မာထမင်းစားချင်သူများအတွက် ၂၇ လမ်းတွင် တူးတူး ရှိသည်၊ ( ဒါပေမယ့် တူးတူးက ၀က် ၊ အမဲမရ … ပြီးတော့ ဟင်းအမျိုး သိပ်မစုံ .. အရသာလည်း နည်းနည်း ပေါ့ပြီး အချိုကဲသလိုပင်) ၊ အေးမေတ္တာကတော့ ဟင်းပိုစုံသည် ( ၀က်သားဆိုလျှင်ပင် ၀က်သားနီချက် ။ အိုးကြီးချက်၊ ဟင်းလေးချက်။ ၀က်ပုန်းရည် ) အစုံရသည်၊
ကျုံးမြောက်ဘက် ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးကနေ အနောက်ဘက်ကို ဖဲ့ဆင်းပြီုး မြောင်းလေးကို ကျော်လိုက်ရင် လမ်းဘေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုင်လေး တဆိုင်ရှိပါတယ်။ မနက်အစောကြီးရောင်းတာပါ၊ ၈ နာရီလောက်ဆို ကုန်ပါပြီ။ ဒံပေါက် ။ ပဲထမင်း ။ အုန်းထမင်းရပါတယ်။ တပွဲမှ ၂၀၀ ရယ် ကြက်သားထည့်မှ ၇၀၀ …. စားလို့လဲကောင်းပါတယ်၊
အသုပ်စုံစားချင်လျှင် လမ်းပေါ်မှာလာတဲ့ ဈေးသည်ကို ထိုင်စောင့်လျှင်စောင့် မစောင့်နိုင်လျှင်တော့ ဈေးချိုထိ သွားရမှာပင် ၊ ဈေးချို အနောက်ဘက် ကိုင်းတန်းဈေးထဲမှာ ဆိုင်ကြီးနှင့် အသုပ်စုံသည် တသည် ရှိသည်၊ ဈေးချိုတောင်ဘက်က အသည်ကတော့ တခါက ကျနော့်ကို တပွဲ ၁၅၀၀ ယူလွှတ်လိုက်သည်၊ ( ရက်စက်ပါပေ့ )
လမ်း ၈၀ လှကလေးစိန် ထိုးမုန့်ဆိုင်ရှေ့က ထမင်းသုပ်ကတော့ အမဲ အချင်း ၀မ်းတွင်းသားနှင့် ရသည်၊ စားကောင်းသည်။
၂၆လမ်း ကျုံးထိပ် Happy Palace နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အရီးတောင်းဆိုင် ရှိသည်.။
လူအများက လွယ်လွယ်နှင့် ထိုးမုန့် ခေါ်သော်လည်း အမှန်မှာကား ထိုခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မာစကပ်၊ အိတုံ၊ ဒိုဒိုး ၊ဆနွင်းမကင်း၊ ရွှေကြည်၊ လမုန့် စသဖြင့် အမျိုးပေါင်းများစွာ ပါသည့်အပြင် တမျိုးစီတွင် မလိုင်၊ သီးစုံ ဆိုပြီး ထပ်ခွဲသေး၏။ ထို့ကြောင့် ဘာဝယ်ရမှန်း မသိလျှင် ထိုးမုန့်ဆိုင်တွင် အမြည်းစားပြီးမှ ကြိုက်ရာရွေးဝယ်နိုင်ပေသည်၊ ( ကျနော်ကတော့ ဘယ်သူ ထိုးမုန့်ဝယ်ဝယ် အမြည်းလိုက်စားတယ် )….
မန်းလေး ၀က်သားတုတ်ထိုးက ရန်ကုန်နဲ့ မတူ။ ရန်ကုန်တုတ်ထိုးကား င်္ဆီများ၏၊ ဆီကြော်နှင့်တူ၏၊ တုတ်ထိုးဗန်းထဲက အရည်ကို ခပ်သောက်ဖို့ မကြိုးစားနှင့်။ ဆီတွေ သာဖြစ်ကာ ဘာမှ အရသာမရှိ၊ မန်းလေးတုတ်ထိုးကား ဟင်းရည်ထဲတွင် ပြုတ်ထားတာနှင့်တူပြီး တုတ်ထိုးဟင်းရည်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး ဓါးပြားရိုက်လေးထည့် သံပုရာရည်လေး ညှစ်သောက် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ထမင်းဆီဆမ်းနှင့် ဆမ်းစား ( ရှလွတ် ) အရသာ ရှိလေသည်၊
၃၄လမ်း B.N ဗားမား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တွတ်ပီ ၀က်သားတုတ်ထိုးရှိသည်။ တုတ်ထိုးအပြင် ကြာဇံကြော် နှင့် ကော်ပြန့်လဲရသည်၊ သူ့ကော်ပြန့်က အထဲမှာ ၀က်သား အစာသွပ်ထားသဖြင့် အသားလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ကာ စားကောင်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကနည်းနည်းပေါ့သည်၊ ( တုတ်ကြီးကြားရင် ဓါးနဲ့လိုက်ခံရဥိးမယ် )
လမ်း ၃၀ ၆၉ ထောင့်မှာ တုတ်ထိုးတဆိုင်ရှိသည် သူလည်းမဆိုး၊ လမ်း ၇၀ ၃၂ထောင့် အာကာမင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က တုတ်ထိုးကတော့ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည်နှင့်ဖြစ်သည်၊ လမ်း၃၀ ၈၁x၈၂ကြားကဆိုင်လဲ စားသူများသည်၊
၁၆ ကျောင်းရှေ့က မြင့်လွင်လည်း နာမည် ကြီးသည်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီး သလိုပဲ၊
ကော်ပြန့်ကြော်လမ်း ၈၀ ၃၈ လမ်းထောင့်က ကော်ပြန့်ကြော်ဆိုင်က အချဉ်ကောင်းသည်၊ ငါးဖယ်ကော်ပြန့် ၊ ငုံးဥကော်ပြန့်။ သီးစုံ ။ အာလူး အစုံရသည်၊
၃၂ လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြားမှာလည်း တဆိုင်ရှိသည်၊ ဗထူးကွင်းထောင့်က သားသတ်လွတ် ဖက်ထုပ်ကြော်ဆိုင်လေးကတော့ ရှိမှ ရှိသေးရဲ့လားမသိ၊ တပွဲမှ ၃၀၀ ရယ်၊
ဖက်ထုပ်ပေါင်းကတော့ စနွာမေကိုပဲ ညွှန်းရမည်၊ ဖက်ထုပ်ပေါင်းအပြင် ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ဆာတေး၊ အသားလိပ်ကြော် တွေလဲ ရသည်၊ ဒီတခေါက်သွားစားတော့ သိပ်မကောင်းတော့။ ဖက်ထုပ်ပေါင်းကလဲ မာဂေါက်ဂေါက်… ဆာတေးကလဲ အချဉ်ရည်က ကျဲတဲတဲနဲ့။
မန်းလေးတွင် အကြီးဆုံး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အုပ်စုမှာ မင်းသီဟ နှင့် ယူနီစံ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ရွှေပြည်မိုးကလဲ နေရာတကာ တွေ့လာရတာပင်၊. လမ်း၈၀မှ ၇၃ ကို ရွှေ့သွားသည့် ပါဝါ လက်ကီး ဆိုင်ကို အစက ကျနော်က ရှဝါ လက်ကီး ချည်းပဲ ဖတ်မိသည်၊.
အောင်တော်မူဘုရားနားက cafe blue ကတော့ ညဘက်ဆို တော်တော်စည်သည်၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျြွေမုန့် ရသည်၊( မုန့်ဗိုင်းတောင့်လို့လဲ ခေါ်တယ် ဗျ )
ဆေးကျောင်းနားက ဆိုလျှင်တော့ အချစ်ရွာ ရှိသည်၊3color ရှိသည်၊ ဆေးကျောင်းသက် ၇င့်သော ကျောင်းသားတချို့ ထိုင်တတ်သည့် မမေ့နိုင်ရှိသည်။ မမေ့နိုင်ကတော့ မိန်းကလေး ထိုင်တာတော်တော်နည်းသည်၊ ဆေးကျောင်းတောင်ဘက် ဆိုင်ကယ် အပ်တဲ့ကွင်းထဲမှာတော့ Banyan Groove ရှိသည်၊
မိန်းဘက်ထဲဆိုလျှင် Friend ရှိသည် ။ ပန်းကမ္ဘာရှိသည်၊ Dynasty ကတော့ တော်တော်ချောင်ကျသော ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ကောင်းသလို ချက်ခုံ၊ ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါ ရှိလို့ လူစည်သည်၊
ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုလျှင် ၃၅ လမ်းက ကီးမားတင်ဝင်း . ၃၅ လမ်း နှင့် ၂၆ လမ်းက ကရ၀ိတ်။ လမ်း ၃၀ အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးနားက ယူနီစံ။ ၇၄ လမ်း ၃၃ လမ်းထောင့်က လှိုင်းတို့ ရှိသည်၊
လမ်း၈၀ ဖားသားလဖုန်းကျောင်းရှေ့မှ ဖောင်တော်သီတွင် အအေးနှင့် သဘောင်္သီးထောင်း ကြက်ညှပ် ရသည်၊ အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက နို့အေးပါ၊
Breeze ကတော့ လမ်း၇၀ ၃၂x၃၃ ကြားတွင် ရှိပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် အကြော်စုံပါရသည်၊ ဆေးကျောင်းတ၀ိုက်တွင်လည်း အအေးလှည်းလေးတွေ တော်တော်များသည်၊
၇၃ လမ်း ၂၇ နှင့် ၂၈ မှာ ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ သူက စည်ဘီယာမရ။ ပုလင်းပဲရသည် ဒါပေမယ့် ကျနော်က သူ့ဆိုင်က မာလာဟင်း ကြိုက်သည်၊
ကန်တော်ကြီးမှာဆို ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်သောက်ချင်လျှင် ကောင်းကောင်းရှိသည်၊၊ ဒဏ္ဍာရီ ရှိသည်၊
ဆခွံနှင့် ရှမ်းအရက် ကြိုက်တတ်လျှင် ၇တနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်မှာ သျှမ်းသျှမ်းတောက် ရှိသည်၊
ဦးပိန်က ထန်းတောမှာ ထန်းရည်စစ်စစ် မရနိုင် ။ ဒါပေမယ့် ကြွက်ကြော်သုပ်ရသည်၊ ( ဒါကလဲ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဘက်က ဆိုင်တွေ မှာပဲ ရတာနော် …. ဟိုဘက်က ဆိုင်တွေ မှာ မရဘူး ) ဆိတ်သားကို ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ပင်စိမ်းရွက် နဲ့ ရောထောင်းပြီး ရှောက်သီးညှစ်ထားသည့် ဆိတ်သားထောင်း စပ်စပ် ။. ငါးကြော်။ ပြောင်းဖူးကြော် စားကောင်းသည်။
၇၁လမ်း ၂၇ လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းဝင်းလေးထဲမှာ လည်း ထမင်းကြော်ဆိုင်တဆိုင် ရှိသည်။ သူက အသားကြော် အရံ မျိုးစုံနှင့်ရသည်၊
ညနေဘက်ဆိုလျှင်တော့ ၇၇ လမ်း တောက်လျှောက်တွင် အာစင်နယ် ရွှေမန်းမေ အစရှိသော လှည်းတွေနှင့် ထမင်းကြော်ဆိုင်တွေရှိသည်၊ ကြက် ၀က် ဆိတ် ငါး အကြော်မျိုးစုံ နှင့် ထမင်းကြော်ကို ငံပြာရည်ဆီသတ် . ငပိထောင်း ၊ တို့စရာ၊ ချဉ်ရည်နှင့် မြိန်မြိန်ကြီးစားနိုင်သည်၊
Myo Htet Zaw ၏ အဖြည့်
Aung Ko Ko Han ၏ အဖြည့်
မြန်မာဟင်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် မိန်းပေါက်နားလေးမှာ မိသာစုထမင်းဆိုင်ရှိသေးတယ်
Ei Mon Thinn Kyu ၏ အဖြည့်
မချိုကြီး …. ကြေးအိုးဆိုင်မပါဘူး … ကြေးအိုးမှာ ၇၄လမ်းပေါ်မှာ အရုဏ်ဦး ကြေးအိုးရှိတယ် အရမ်းကောင်းတယ် …
စန္ဒာမေ ဖက်ထုပ်ပေါင်းဆိုင်မှာလည်း ကြေးအိုးရပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ လုံးဝမကြိုက်ပါ …
ပွစိစိကြီး ဖြစ်နေသလိုပဲ … နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ နန်း…ရှေ့ က Cafe Queen မှာ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ကြေးအိုးကောင်းကောင်းရတယ် … အများကြီးလည်းပါတယ် တစ်ယောက်တည်း စားလို့သိပ်မကုန်တတ်ဘူး ..ရွှေတောင်တန်းကတော့ အရင်ကလည်း နာမည်ကြီး အခုလည်းနာမည်ကြီးပဲ .. တခြားတခြားသော ကြေးအိုးဆိုင်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်တော့ ဒီလောက်ပဲ သိပါတယ်
ဒုတိယပို့(စ) မှာ ကရွဲစည်က ဘီယာဆိုင် မေးထားသလားလို့။
ဒီ ပို့(စ) မလာလို့ကတော့ အသိပဲ။
ကိုယ်မန်းလေးလာလည်ရင် ပတ်စားကြတာပေါ့ သဂျားရေ
ဖတ်ထားပါ..မှတ်ထားပါ.. လာလည်ရင် လိုက်ကျွေးပါ..
မမဂျီး ပိုစ့် ဂ
၁၆လမ်း(၈၁လမ်းနဲ့၈၂လမ်းကြား)လမ်းမြောက်ဘက် အထမ်းနဲ့ မြီးရှည်ဆိုင်လည်း ဝက်သားစားသူတွေအတွက် အရသာကောင်းဆိုင်ပါဘဲ။ ဝက်သား ကလီစာ ကြိုက်ရာနဲ့ရသလို ဒညင်းသီးပါကြိုက်ရင်ထည့်သုတ်ပေးတဲ့ဆိုင်ပါဘဲ။ လူကတော့ မစဲဘဲဗျို့
ရှမ်းပုံစား ထမင်းဆိုင်တန်းလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့နေရာကတော ၃၃လမ်း (၇၂လမ်းနဲ့၇၃လမ်းကြား)ပါဘဲ နေ့လည်ဆို ထမင်းလာစားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ ၃၃လမ်း အပြည့်နီးပါးဘဲဗျ
တွတ်ပီဝက်သားဒုတ်ထိုးက အခု ၃၃ လမ်း (၈၄လမ်းနဲ့ ၈၅လမ်းကြား) လမ်းမြောက်ဖက်ခြမ်း မှာပြောင်းဖွင့်ထားသလို မကျီးရိပ်မြီးရှည်ကလည်း ၈၃လမ်း (၃၂လမ်းနဲ့၃၃လမ်းကြား)ကိုရောက်သွားပြီ။
I Bar ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ မနက်ပိုင်း ၁၁ နာရီထိ ဒင်ဆမ်းရပြီး အရသာလဲကောင်းပါတယ် ၆၅လမ်း(၂၆လမ်းနဲ့၂၇လမ်းကြား)မှာပါ။
ဖြည့်ပေးတဲ့ လိပ်စာတွေအတွက် ကျေးဇူးကြီးကြီးတင်ပါတယ်
စား စ ရာ ဆိုင် တွေ စုံ လင် လှ ပါ လား
မှတ် ထား ပြီး လာ စား မယ်
လေးပေါက်ကြီး ကျွမ်းတယ် မမ။
ဒို့ နှစ် ယောက် ပေါင်း ပြီး
နှိပ် စက် လိုက် ကြ စို့ 
အ ချွန်နဲ့  မ သည် လား
နှစ် ယောက် ပေါင်း လာ ခဲ့ စမ်း ဘာ
တော် ဘာ ဘီ ချင့် လို့ ပြော လောက် အောင် လိုက် ကျွေး ဘာမည်
နောက်တစ်ခေါက် မန်းလေး ရောက်တဲ့အခါ
မန်းလေးသား၊သူ တွေကို နှိပ်စက်ရဦးမည် …
မန်းကီး စုထား …
သဂျား ဆိုတဲ့အသံပဲံ ကြားရသလိုလို
နွားနို့ဟင်း ဆိုတာ ဘာလဲဟင် ။
အဲလာကျနော် မပြောတတ်ဘူး ဘဖော။
ချိုစိမ့် အီအီ နဲ့ နွားနို့ အရသာပါတာပဲ မှတ်မိတယ်။
ဘရန်းဒက် ကေဇီ ရဲ့
လမ်းညွှန်ကို ၀င်လေ့လာသွားတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
လေ့လာပြီးရင် သများလာတဲ့အခါ မန်းလေးထိ မုန့်လိုက်ကျွေးပါ။
ဦးပိန်က ထန်းတောမှ ထန်းရည်အစစ်ရတဲ့ဆိုင် ကျွန်တော်သိသည်…. သများကိုခေါ်ရင်လိုက်ပို.မည်…
ဆိုင်နံမယ်ကတော့ အဖွားကြီးဆိုင် ပဲ.. သရက်ပင်တွေအောက်မှာ ဖျာခင်းသောက်လို.ရသည်… တောအစစ်လဲရသည်… ကိုရီးယားလိုဆို ဆိုဂျူပေါ့.. အေ့…………..
သများ ကို သများသွားရင် ခေါ်ပါ့မယ်။
သူများတွေကိုတော့ သများကို သများ ခေါ်သွားကြောင်း မပြောနဲ့နော်။
အို သများအုပ်ထိန်းသူကိုတော့ပြောခဲ့ရမှာပေါ့အေ.. တော်ကြာ သများကို သများက ထန်းရည်မူးပြီး ဟိုဒင်းပြုမှဖြင့် ရေတိမ်နစ်ရချည်ရဲ.အေ.. အို မရဘူးပြောမှာဘဲ ပြောမှာဘဲ..
“ကိုယ် မူးလို့ မှားသွားတာပါကွယ် ”
မန်းလေးကိုတော့ မကျွမ်းလို့ မန်းလေးရောက်ရင် မြို့ခံများမှ မှတ်သားထားပြီးလိုက်ကျွေးစေလိုဘာဂျောင်း :-
အနော့ ယောက်ခမွကို စောင့်ရှောက်လိုက်ကြပါ။
မန်းလေးရဲ့ ဘရန်းကို …
မန်းလေးသား စကားးးး ကို
မန်းလေးသား အစားးးး လို့ ပြောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ဆန်ချိုအေး ဆိုင်ကောင်းကောင်း လေးသိရင် ညွန်ခိုင်းတာ
ပို့(စ) ၃ ခုလုံးကိုသေချာဖတ်။
ရွှေမူဆယ် က အကောင်းဆုံးပဲ။\_
ရန်ကုန်သားတွေဘာလို့.. အဲလို.. ရန်ကုန်စားညွှန်.. ၀ါးတီးစာမရေးသလည်း.. တွေးလို့မရ..။
ဧကန်ဒ အစား ဝါသနာအိုးတွေ နည်းလို့လားးးး
ဒါမှမဟုတ် ညွန်းစရာ များလို့ လားးး
စာဆို ရှိတယ်လေ ဗျာ
ရန်ကုန်သား အကြွား ..
မန်းလေး သား အစား …တဲ့ ဟီဟိ
မောင်(မန်းလေး ကိုချစ်တဲ့ ရန်ကုန်သား)
မန်းလေး ရောက်ရင် ဘယ်နာမည်ကြီး နာမည်ရဆိုင်မှာ မရောက်ဖြစ် အဓိကအကြောင်းက အစားသိပ်မစားလို့။ ဗိုက်နည်းနည်းပြည့်ရင်ပီးရော တွေ့တာစားလိုက်တာပဲ။
သို့ပေသိ တခုတ်တရ သွားတတ်တဲ့ နေရာတွေတော့ ရှိတယ်။
၁၆ကျောင်းက ၂နှစ်တက်ခဲ့ဖူးတာမို့ အလွမ်းပြေသွားရင်း မြင့်လွင်မှာ ဒုတ်ထိုးစားတယ်။
ဈေးချိုက ကြာဇံကြော်နဲ့ ငါးရေခွံကြော် ကြိုက်တယ်။ သွားစားတယ်။
ထန်းရည်အစစ်ကတော့ မတ္တရာသွားတဲ့လမ်းမှာ တစ်ဆိုင်၊ ရန်ကင်းတောင်သွားတဲ့လမ်းမှာ တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ တနေ့အရင်သွား မနက်ဖြန်မနက် ဘယ်အချိန်လာမယ် ကြိုပြော ပီးရင်တော့ ထန်းပင်လက်ညှိုးထိုးပီး တနေကုန်ထိုင်သောက်တယ်။ အနည်းဆုံး ၁၄/၅ မြူတော့ကုန်တယ်။
ဘီယာဆိုင်က ကပေတို့နဲ့ဆို ထိုင်ဖြစ်တယ်။ နိုမို့ဆို မထိုင်ပါ။ ကြိုက်လည်းမကြိုက်ပါ။
အဓိကကတော့ အရက်ပါပဲ။ အရက်ကတော့ တံဆိပ်အစုံသောက်တယ်။ တေ့စ်ကြိုက်ရင် ဝယ်ရလွယ်ရင် စွဲသောက်တယ်။၁၀ခါလောက်အဲ့တံဆိပ်သောက်ပီးရင် နောက်တခုပြောင်းတယ်။ အရက်သောက်ရင် ဆူတဲ့နေရာမသောက်ချင်ဘူး။ အဓိကအမြည်းကတော့ အသီးအရွက်၊ အချဉ်တခုခုနဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ပဲ။ အခု လောလောဆယ် ရာသီပေါ်မရမ်းသီးအစိမ် ဆေးပေါ့လိပ်နဲ့ Singleton အရက်အရမ်း ခိုက်နေတယ်။ ဒီမှာဝယ်ရခက်နေလို့ စလုံးမှာရှိရင်ပို့ပေး